အပျိုမြှေးရှိမှ အပျိုစစ်တာလား။ - Hello Sayarwon
Update Date ဩဂုတ် 12, 2020 .2mins read
ဟာသလေး တစ်ခုပြောပြဦးမယ်။ တရုတ်ပုံပြင်လေးပေါ့။ မင်္ဂလာဦးညမှာ သတို့သမီးအမေက သူ့သမီးလေးကို မင်ဘူးလေး ပေးလိုက်တယ်။ မတော်တဆများ သွေးမထွက်ခဲ့ရင် အိပ်ရာခင်းမှာသုတ်လိုက်ဆိုပြီး။ မနက်မိုးလင်းတော့ သတို့သားက ကြောက်လန့်တကြားအော်လေရဲ့။ အိပ်ရာခင်းကြီး စိမ်းနေလို့ သူလုပ်တာ သည်းခြေအိတ်ထိသွားပါပြီဆိုပြီး ငိုအားထက် ရယ်အားသန်ခဲ့ရပါသတဲ့။
ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ (အခုချိန်ထိ) အပျိုမြှေးဆိုတာ မိန်းကလေးတွေကို စျေးဖြတ်နေတုန်းပါပဲ။ အပျိုမှန်ရင် အပျိုမြှေးရှိရမယ်။ အပျိုမြှေးက မင်္ဂလာဦးညမှာ ပေါက်ရမယ်။ သွေးထွက်ရမယ်။ ဒါမှ အပျိုစစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဒါကို ဂျင်းလို့ပဲ ပြောပါရစေ။
ဒီအပျိုမြှေးကြောင့်ပဲ လင်မယားတွေ ပြဿနာတက်၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မယုံကြည်လို့ ကွဲကြ ပြဲကြတာတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ ဒီခေတ်ကလေးတွေ တစ်ခုတော်တာက အပျိုမြှေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ သိပ်အယုံအကြည်မရှိကြတော့ပါဘူး။
ဒီအပျိုမြှေးလေးက ဒီလောက်တောင်ပဲ အရေးကြီးနေလို့လား။ အောက်ကအချက်တွေ ဖတ်လိုက်ရင် ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
အပျိုမြှေးက ဘာလုပ်ဖို့ ရှိနေမှန်း မသိကြသေးပါဘူး။
အူအတက်တို့၊ အံဆုံးသွားတို့လိုပဲ မရှိလည်း ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ။ ရှိနေလည်း ဘာအလုပ်မှ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အရင်ကတော့ အပျိုမြှေးက မိန်းမကိုယ်ကို ပိုးတွေ မဝင်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ ပြောပေမယ့် ဒီလောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အပျိုမြှေးက ကြာလာလေလေ ပါးလေလေပါ။
အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အပျိုမြှေးက သူ့အလိုလို ပါးတတ်ပါတယ်။ ပါးပြီး အလိုလို ပေါက်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။
တချို့က မွေးကတည်းက အပျိုမြှေးကို ပါမလာတာ။
ကဲ ရှင်းရော။ ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ။ Imperforate hymenလို့ ခေါ်တဲ့ အပျိုမြှေးလုံးဝပိတ်နေတဲ့ ရောဂါတောင် ရှိသလို မွေးကတည်းက အပျိုမြှေး မရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။
အပျိုမြှေးဆိုတာ လိင်တံနဲ့ ထိမှ ပေါက်နိုင်တဲ့အရာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ပေါက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေမှ အများကြီးပါပဲ။
-ကတာ (ဥပမာ ခြေတွေ လက်တွေ ဆန့်တန်းပြီး ကရတာမျိုးပေါ့)
-ငယ်ငယ်က အဆော့သန်တဲ့ ကလေးမတွေ (ရေကူး၊ သစ်ပင်တက်၊ ခုန်ပေါက်ပြေးလွှား) သူတို့ဆီမှာ အပျိုမြှေးရှိချင်မှ ရှိမှာပါ။
–menstrual cupတို့ tamponတို့ ထည့်ရင်း အရှိန်လွန်သွားတာ
-မိန်းမကိုယ် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးတာ
-တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းလုပ်ရင်း မိန်းမကိုယ်ထဲကို ဆေးကြောရာက မတော်တဆ ထိသွားတာ
–တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာ စတာတွေကြောင့် ပေါက်သွားတတ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူတာက တချို့တွေက အပျိုမြှေးပေါက်ရင် နာပါတယ်။ သွေးထွက်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် မသိလိုက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အပျိုမြှေးပေါက်တိုင်း နာရမယ်၊ သွေးထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အစွဲတွေကို မေ့လိုက်ပါ။
နာတိုင်း သွေးထွက်တိုင်းလည်း အပျိုမြှေးပေါက်တာ မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဆရာတို့။
အတူနေလို့ နာတယ် သွေးထွက်တယ်ဆိုတာ အောက်က အကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
-စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ မိန်းမကိုယ်ကြွက်သားတွေ ညှစ်ထားတာကြောင့် နာတာ
-မိန်းမကိုယ်က အရည်မထွက်သေးဘဲ ဆက်ဆံတာကြောင့် အတွင်းသားတွေ ပွန်းပြီး နာတာ၊ သွေးထွက်တာ
-ရောဂါအခြေအနေ၊ သောက်နေတဲ့ဆေးတွေကြောင့် မိန်းမကိုယ်ခြောက်သွေ့ပြီးနာတာ
-သုံးတဲ့ ကွန်ဒုံးနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာ စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အပျိုမြှေးဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးရင် ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ သေချာတာတော့ ဒါကို ကြည့်ပြီး အပျိုစစ် မစစ်ခွဲလို့မရတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် အပျိုမြှေးအတွက်နဲ့ သံသယတွေ ပွားမနေကြပါနဲ့တော့။
လူပျိုဖော်/အပျိုဖော် အဝင်စောတာကို ဘယ်လိုသိမလဲ၊ ဘယ်လို ကုသမလဲ
မိဘတွေက မိန်းကလေးတစ်ဦးကို အပျိုရည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုမိသောအခါ
ကလေးငယ်, ကလေးငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်း, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 27, 2020 .2mins read
မိန်းမကိုယ်က ပန်းတစ်ပွင့်လို မွှေးကြိုင်နေစရာ လိုလို့လား။ မိန်းမကိုယ်မှာ သဘာဝ အနံ့ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ မိန်းမကိုယ်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘာ Product မှ မလိုအပ်ပါဘူး။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး နိုဝင်ဘာ 26, 2020 .2mins read
Menstrual Cup လို့ခေါ်တဲ့ ရာသီခံခွက်လေးတွေအကြောင်း မကြာမကြာ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီခွက်အကြောင်းပြောရင် ရင်ဆိုင်ရတဲ့ မေးခွန်းတွေက မိန်းမကိုယ်နဲ့ ဆန့်ပါ့မလား။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး နိုဝင်ဘာ 25, 2020 .2mins read
နှလုံးနဲ့ နှလုံးအပြင်ဘက်က Pericardium ၊ Endocardium အလွှာပါးအကြား ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားတွေကြောင့် ရောင်ရမ်းတဲ့ ပြဿနာ ကို နှလုံးပိုးဝင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။
နှလုံးရောဂါ, ကျန်းမာရေးစင်တာ အောက်တိုဘာ 25, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 22, 2021 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 30, 2020 .3mins read